ခကျြခကျြအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
လောင်းကစားချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ဥပဒေရေးရာဖြစ်ပါသည်, ဤလောင်းကစားပုံစံအားလုံးကိုသက်ဆိုင်သည်။ Czech ဖြစ်ကောင်းဒီနီးပါးသည်ခပ်သိမ်းသောမြို့တို့၌ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏ရှေ့မှောက်တွင်ကရှင်းပြသည်အလွန်မဆင်မခြင်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလောင်းကစားဝိုင်း၏မြင့်မားသောအဆင့်မှာဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်ရန်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအမြတ်ဖြစ်စေသောသိသာသည်။ ခကျြမြို့တော်၌, ပရာ့ဂ်အကြောင်းတစ်ဒါဇင်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံန်ထမ်း။ အများဆုံးလေးစားဖွယ်မိုးလုံလေလုံမှန်အိမ်ဆောင်ဟီလ်တန်, သံအမတ်ကြီးဟင်နရီများထဲတွင်။
မေလ 2016 ခုနှစ်တွင်ခကျြအထက်လွှတ်တော်ပြည်တွင်းဂိမ်းစျေးကွက်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများမှဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်အရသိရသည်အများအပြားဥပဒေကြမ်းများအတည်ပြုခဲ့သည်။ ပဌမလအဖြစ်, လောင်းကစားဝိုင်းပြခန်းနှင့်အရက်ဆိုင်များအပါအဝင် 2017 ကာစီနိုလောင်းကစားရုံထက်ပိုရှိပါတယ်ဇန်နဝါရီလ 100 အတွက်ဒေတာ, အဘို့အဖြစ်။ အဆိုပါကဖေး, အရက်ဆိုင်နှင့်တူသောတခြားနေရာတွေမှာသင်တို့သည်လည်းအမျိုးမျိုးသော slot နှစ်ခုနှင့် slot ကစက်တွေရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက်တစ်ဦးချင်းစီဂိမ်းစက်တွင်အကြောင်းကို 200 လူများအတွက်အကောင့်။
ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက် on-line ကလောင်းကစားဝိုင်း
ကျနော်တို့ချက်သမ္မတနိုင်ငံတွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားအဖြစ်ပြည်, ဥပဒေရေးရာကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစား directory ထဲတွင်သတိပြုပါ။ 1 ဇန်နဝါရီလ 2017 မှစ. တိုင်းပြည်အင်အားသို့အွန်လိုင်းဂိမ်းချက်သမ္မတနိုင်ငံလောင်းကစားတဲ့ဥပဒေသစ်ဝင်ကြ၏။ သူ့ကိုအဆိုအရလိုင်စင်ယခုမှသာဒေသခံလောင်းကစားအော်ပရေတာမခံနိုင်ပေမယ့်ဥရောပသမဂ္ဂနှင့်ဥရောပစီးပွားရေးဧရိယာကနေသူတို့ရဲ့ counterparts တွေကို။ ဒါဟာပြင်ဆင်ချက်၏နိဒါန်းနှင့်တကွ, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအားလုံးတရားမဝင်ဒိုမိန်းပိတ်ဆို့ဖို့အားလုံးပါဝါရှိပါတယ်သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ အခြားအမှုအရာတို့ကိုအနက်လောင်းကစားအော်ပရေတာများနှင့်စုံအခွန်နှုန်းထားများအဘို့အအွန်လိုင်းလောင်းကစားအပေါ်ပညတ္တိကျမ်း။
ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ဆိုဒ်များအွန်လိုင်းလောင်းကစား၏ပထမဦးဆုံးအော်ပရေတာ, 2008 အတွက်လိုင်စင်ရခဲ့နားဆင်နိုင်ပါတယ် SAZKA, Synot သိကောင်းစရာ, ချန့်စ, Tipsport နှင့် Fortuna ခဲ့ကြသည်။ အဆုံးစွန်သောင်း၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာအားကစားအပေါ်အွန်လိုင်းလောင်းကစားဆိုက်များ၏ကွန်ယက်ရှိပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, Fortune မဂ္ဂဇင်းအဆိုပါထီကျင်းပတိုင်အောင်, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပိုလန်, လိုဗက်ကီးယားနှင့်ခရိုအေးရှားအတွက်ဖုန်းပေါ်မှာကစားနည်းကိုယူပြီး။
ထိပ်တန်း 10 ခကျြအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအလွန်ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်၌မဟုတျဘဲထိုကဲ့သို့သောကြီးတွေတိုင်းပြည်ကဲ့သို့လောင်းကစားထူထောင်မှုသောင်းချီ။ တစ်ဦးတည်းပရာ့ဂ်၌, 10 ကာစီနိုလောင်းကစားရုံကျော်ရှိပါတယ်။ သူတို့ထဲကခေါင်းဆောင်တွေဟာမိုးလုံလေလုံမှန်အိမ်ဆောင်ဟီလ်တန် Savarin သံအမတ်ကြီးနှင့်ဟင်နရီ (ကာစီနိုလောင်းကစားရုံအခြားအမည်များနံပါတ်ရှိခြင်း) ဖြစ်ကြသည်။
ကာစီနို "မိုးလုံလေလုံမှန်အိမ်ဆောင်" ဟု 5-ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်က "ဟီလ်တန်" ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်နှုန်းထားများ၏ကျယ်ပြန့အပြင်ဂိမ်း၏လျောက်ပတ်သောအကွာအဝေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, ပရာ့ဂ်တွင်အကြီးဆုံးဂိမ်းအိမ်တော်ဖြစ်၏။ ဒီလောင်းကစားရုံချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ဝန်ဆောင်မှုအတော်လေးလျောက်ပတ်သောအဆင့်တွင်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်အဖွဲ့အစည်းကိုယ်တိုင်ကကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။ တစ်ဦးလောင်းကစားရုံနှင့်အပန်းဖြေအဆောက်အဦများတွင်တည်းခိုအပြင်ဖောက်သည်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုစားသောက်ဆိုင်, ဘား, ရေကူးကန်, ကျန်းမာရေးကလပ်နှင့်အခြားအပန်းဖြေအဆောက်အဦကိုဆက်ကပ်ရန်။
ကာစီနိုသံအမတ်ကြီးအမည်တူ၏ဟိုတယ်အတွက် Wenceslas Square ကိုအပေါ်ပရာ့ဂ်၏အလယ်ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်။ ဒီအဖွဲ့အစည်း၏အဓိက client များသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှခရီးသွားများဖြစ်ကြသည်။
Savarin - ပရာ့ဂ်၌အလောင်းကစားရုံချက်သမ္မတနိုင်ငံ , ရှေးအကျဆုံးနှင့်ဂုဏ်သရေရှိလောင်းကစားရုံများထဲမှစဉ်းစားသည်။ ဒါဟာအဖြစ်အစောပိုင်း 1745 အဖြစ်စိုက်ထူခဲ့သည့်ဘားရို့စတိုင်လ်အတွက်သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦများတွင် Na Prikope အပေါ်တည်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံအတွင်း၌၎င်း၏ဇိမ်ခံနှင့်အတူစိတျစှဲနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံအရမ်းလေးစားမိပါတယ်စေသည်။ ဒီလောင်းကစားဝိုင်းတည်ထောင်ခြင်းရိုက် "ရှေးကာလ" ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ပါကရန်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းကိရိယာများလောင်းကစားရုံဧည့်သည်များနှင့်ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ၏အဖြစ်မှန်ပြန်လည်ရောက်ရှိ။ ဒီနေရာတွင်အမေရိကန်ကစားတဲ့, ဆိပ်ခံ, ဖဲချပ်ဝေ (ခုနစ်, သုံးကဒ်ဖဲချပ်များနှင့်အိုအေစစ်) နှင့် slot ကစက်တွေနဲ့တူဤအလောင်းကစားရုံဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်။ client အားလုံးလောင်းကစားရုံဘားအနားယူမှာအခမဲ့အချိုရည်ကိုဆက်ကပ်။ ငွေကြေးအဆိုပါဂိမ်းတည်ထောင်ခြင်းအတွက်လက်ခံခဲ့သည် - ယူရိုငွေနှင့်ခကျြ koruna ။ အဆိုပါလောင်းကစားရုံမှဝင်ပေါက်အခမဲ့နှင့်ဧည့်သည်များ၏အသွင်အပြင်အဘို့မဆိုလိုအပ်ချက်များဆံ့မခံပါဘူး။
အဲလက်စ်သို့မဟုတ်အခြား Yalta ကိုခေါ် Wenceslas Square ကိုအပေါ်ဟင်နရီလောင်းကစားရုံ, အခြားလောင်းကစားရုံချက်သမ္မတနိုင်ငံတို့တွင်အကြီးဆုံးမှုနှုန်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ, ဒါပေမယ့်လည်းသမာဓိရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်. အလွန်ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကောလာဟလများအရ, လောင်းကစားရုံအတွက်လိမ်နေတဲ့ဘုံဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤနေရာတွင်အဘယ်သူမျှမအများအပြား croupiers surprising မဟုတ်ပါဤအရပ်ဌာနကိုရုရှားနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်ကိုရုရှားကနေကစားသမားများအတွက်ကြောင်းရုရှားဘာသာစကားအချက်ကိုအားဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ပရာ့ဂ်အားလုံးကိုလျက်ရှိသောလုပ်ငန်းလည်ပတ်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံမြို့လယ်တွင်တည်ရှိနေကြလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ သင်ကစားပွဲများအတွက်သင့်လျော်သောအဖွဲ့အစည်းကိုရှာဖွေရန်ဆန္ဒရှိလျှင်အဆိုကစားသမားများအတွက်ခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ပင်ပထမဦးဆုံးအခကျြမြို့တော်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
အများဆုံး Blackjack နှင့် Poker: အလောင်းကစားရုံခကျြကတ်များအတွက်လူကြိုက်များတဲ့ဂိမ်း ။ ရရှိနိုင်ကစားတဲ့, ထီ။ ကဒ်အထိုင်စက်တွေကြောင့်သူတို့နိုင်ငံရဲ့လောင်းကစားဝိုင်းထူထောင်မှုအတွက်, ဒါပေမယ့်လည်း၎င်း၏အရက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များတွင်မသာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ကာစီနိုလောင်းကစားရုံခရီးသွားဧည့်ဒါပေမယ့်လည်းဒေသခံများသာဖြစ်ကြောင်း Regulars ။ စာရင်းဇယားအရ, Czech ပိုက်ဆံအဖွဲ့အစည်းများ4ဆပိုအမေရိကန်တွေလောင်းကစား၌ကျန်ကြွင်း။ ခရီးသွားဧည့်အနေဖြင့်ရုရှားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့မှကစားသမားများဖွင့်စောဒနာ predominant ။
အဆိုပါလောင်းကစားရုံများတွင်ချိုးဖောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်. နှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဒေနှင့်အညီထိုအားလုံးလောင်းကစားထူထောင်မှု၏တတိယအတွက်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ တချို့ကချိုးဖောက်မှုများအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းမှတ်တမ်းတင်လုံခြုံရေးကင်မရာများ, မလုံလောက်သော evidentsii ဧည့်သည်များနှင့်တိုကင်ဖို့ကန့်သတ်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်များစွာသောလောင်းကစားရုံချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ရုံးများ၏လုပျငနျးစစ်ဆေးရေးအလောင်းကောင်ထံမှဝှက်ထားခဲ့သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်ထိုသို့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်အားနည်းအလုပ်ကာကွယ်မှုမှတ်ချက်ချသည်။
ယင်း၏အခြားမြို့များအတွက်လောင်းကစားရုံချက်သမ္မတနိုင်ငံသည် 13-00 တစ်ရက်နှင့်အတူစတင်နိုင်ရန်, တစ်ဦးလောင်းကစားဝိုင်းတည်ထောင်ခြင်း Brno တွင် "ဂရန်း" (တိုင်းပြည်အတွင်းဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့) ရှိဖော်ပြခဲ့တဲ့စေခြင်းငှါနှင့် 4-00 နာရီတွင်ပိတ်။ ဖျော်ဖြေရေးအဘို့အကစားတဲ့, ကင်လုပ်ခိုင်းနှင့် slot ကစက်တွေရှိပါတယ်။
လူကြိုက်များလောင်းကစားဝိုင်းတည်ထောင်ခြင်း Teplice ထဲမှာ "777" (ဘယ်မှာရှိနိုင်ပါကဒ်ဂိမ်းများ, ကစားတဲ့နှင့်အခြားဖျော်ဖြေရေး) နှင့်အခြားလောင်းကစားရုံချက်သမ္မတနိုင်ငံ။
ဥရောပအကောင်းဆုံးလောင်းကစားရုံ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ Saga နေဆဲဖြစ်သည်။ ခကျြမြို့တော်ပရာ့ဂ် - CasinoToplists ကမ္ဘာ၏အကြီးဆုံးခရီးသွားစင်တာများတဦးရန်သင့်အားဖိတျချေါထား။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ - ထိုပထဝီ၏အကျဉ်းသမိုင်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်;
မြေယာ-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့်ပရာ့ဂ်ဥရောပ Poker ခရီးစဉ်နှင့် World Poker Tour တွင်အွန်လိုင်းဖဲချပ်ဝေစီးရီး;
ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးဦးတည်ရာကိုဘယ်လာရုစ်ဖြစ်ခဲ့သည်, ထိုမတိုင်မီကျနော်တို့စတိုးနီးယား, လတ်ဗီးယား, လစ်သူနှင့်ပိုလန်ရှိကြ၏။
ပရာ့ဂ် - ဖြစ်ကောင်း, ငါတို့ဥရောပနှင့်ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးမြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းရန်, အချိုပွဲမှရတယ်။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံဘီယာ, ဒီမှာစျေးပေါအစားအစာ, သူဌေးအချက်အပြုတ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ... ဒါပမေဲ့အံ့သွကွဲပြားခြားနားသောကာစီနိုလောင်းကစားရုံသာကျော်ကြားသည်။
ပရာ့ဂ်, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ: သန့်ရှင်းသောဘုရားသည်ရောမအင်ပါယာ၏မြို့တော်
ပရာ့ဂ်၏ပထမဦးဆုံးဖော်ပြသည့် VI ကိုရာစုဘီစီသွားပါ။ အီး။ , မြို့၏အမည်များ၏ဇာစ်မြစ်နှင့် ပတ်သက်. အငြင်းပွားမှုများကိုယနေ့တိုင်အောင်ရပ်တန့်ကြပါဘူး။ တစ်စုံတစ်ဦးကအခြေချနှုတ်ကပတ်တော်ကို "ခုံ" သို့မဟုတ် "Ford" အတွက်အမည်ရှိခဲ့စောဒကတက်သည်, သို့သော်ဤသာကွေးမြားဖွစျသညျ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပရာ့ဂ်ဒီကိုမှန်ကန်စင်တာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ဤကိစ္စတွင်၌အလှနျအရေးကွီးမဟုတျပါဘူး, အရှေ့ဥရောပလျှောက်ထားမထားဘူး။ အဘယ်အရာကိုအရေးပါသည်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့ပရာ့ဂ်ဒေသတွင်းမှာ၏ဗဟိုခဲ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ စီးတီးသည်သန့်ရှင်းသောရောမအင်ပါယာ, ဘိုဟီးမီးယား, အဲဒီနေ့က၏မြို့တော်သွားရောက်ခဲ့သည်။
ဒါဟာအစတက်တက်ကြွကြွယဉ်ကျေးမှုနှင့်သိပ္ပံဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ အဆိုပါ 16th ရာစုအကုန်မှာပရာ့ဂ်ဒိန်းမတ်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်, ဗေဒင်ဆရာများနှင့် alchemist တှငျနထေိုငျ Tycho Brahe ။
တကယ်တော့, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၏မြို့တော်ဥရောပအတွက်သုံးအများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်မြို့တို့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ပဲရစ်ပေမယ့်လန်ဒန်ကြောင့်ဒါဟာ။
လောင်းကစားချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ပိတ်ပင်ထားခြင်းမရှိပါ။ ပရာ့ဂ်အတွက်စုစုပေါင်း 10 ကာစီနိုလောင်းကစားရုံထက်ပိုမိုဖြစ်ပါသည် - အကြောင်းကို 230 slot ကစက်တွေနဲ့ 130 ဂိမ်းကစားစားပွဲတစ်ဦးစုစုပေါင်း။
ဗဟိုသို့မဟုတ်စင်တာမှအနီးကပ် - လောင်းကစားအိမ်များ, မြို့၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများမှာအကောင်းဆုံးတည်ရှိနေကြသည်။ နှောင်းပိုင်းညဦးယံအချိန်နှင့်နီးပါးနံနက်တိုင်အောင်, ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးတစ်ပါတ် - အတူတူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဆင်ရေး၏ Mode ကို။
ဒါဟာအဓိကဖဲချပ်ဝေစီးရီး၏အဆင့်ဆင့်အိမ်ရှင်အဖြစ် - ဥရောပ Poker ခရီးစဉ်အားဖြင့်၎င်း, ကမ္ဘာ့ဖလား Poker Tour ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီဇင်ဘာလအတွက်ပရာ့ဂ်၌အအကျော်ကြားဆုံးဖဲချပ်ဝေကစားသမားများနှင့်အပျော်တမ်းလောင်းကစားဆွဲဆောင်ထားတဲ့ကြီးမားတဲ့ဖဲချပ်ဝေပွဲတော်, ကျင်းပခဲ့သည်။
EPT, ယေဘုယျအားဖြင့်မှာ "ဧည့်သည်" များမှာ ဟီလ်တန် ပရာ့ဂ် အထူးသဖြင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လောင်းကစားရုံဖြစ်သော Artrium ; နှင့် WPT များသောအားဖြင့်အခြားလောင်းကစားရုံကိုရွေးကောက်ပြီး - Card ကိုကာစီနိုပရာ့ဂ် , ရှိသမျှကစားသမားများအတွက်အခြားလူကြိုက်များ destination သည်။
ပရာ့ဂ်၌ရှိသမျှသောအဓိကအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကိုလူကြိုက်အများဆုံးလောင်းကစားရုံဂိမ်းရှိပါတယ် - Blackjack, slot ကစက်တွေ, ကစားတဲ့, ဖဲချပ်ဝေ, etc; ။ အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပြတိုက်ပြပွဲခံထိုက်သောလောင်းကစားခန်းမများ၏အလှဆင်။
သင်ပထမဦးဆုံးအတန်းအစား၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမြည်းစမ်းဖို့ဆန္ဒရှိပါကပထမဦးစွာသောအရာတို့ကိုပထမဦးဆုံးပြုလုပ်သွားဖို့လိုအပ် Wenceslas Square ကို ။ ဥပမာ - အတော်ကြာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခြေစိုက်လောင်းကစားရုံရှိပါတယ် Palas Savarin နှင့် Banco ၏ . နှစ်ဦးစလုံးသို့သော်စားဆင်ယင်ကုဒ်နှင့်ဝန်ခံချက်စျေးနှုန်း၏မရှိခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကိုပထမဆုံးနှင့်အများဆုံးခရီးသွားဧည့်များအတွက်, အရှင်စံပြအလွန်ကောင်းပါတယ်။
1.Stary မြို့နှင့်ချားလ်စ်တံတား: ခရီးသွားဧည့်ဆွဲဆောင်ကြောင်းဘာမျှမပရာ့ဂ်၏အထင်ကြီးဗိသုကာအဖြစ်ရှိနေပါသည်။ တမြို့လုံး၏သမိုင်းဝင်အစိတ်အပိုင်းယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်စာရင်းတွင်ထည့်သွင်း။
သင်တန်း၏, ထိုဖြစ်ပါတယ်လူကြိုက်အများဆုံးပုရာခကျြမြို့တော်စိတ်ဝင်စားဖို့တံတားများအများကြီး (မြို့မြစ် Vltava အပေါ်ရပ်တည်), အတွက် ချားလ်စ်တံတား။ ကျယ်ပြန့်ဝက်အရှည်ကီလိုမီတာနှင့် 9.5 မီတာကိုတည်ဆောက်ခြင်းဒါဟာထူးခြားတဲ့သာလမ်းသွားလမ်းလာမှဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သုံးဒါဇင်ပန်းပုနှင့်ပန်းပုအုပ်စုများနှင့်အတူအလှဆင်ဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့်ခရီးသွားဧည့်များ၏ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအစီအစဉ်၏တစ်ဦးမဖြစ်မနေအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု - တံတားပေါ်လမ်းလျှောက်။
2 ။ ပရာ့ဂ် Castle: ကမ်ဘာပျေါတှငျအကြီးဆုံးရဲတိုက်သည် "ကရင်မလင်" ၏ရုရှား analogue စဉ်းစားသည်။
ရဲတိုက်မြို့ကိုကျော်ညားမြင့်မားတစ်နည်းနည်းဝေးဗဟိုကနေဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ပရာ့ဂ်ရန်သင့်ခရီးစဉ်၏ရည်ရွယ်ချက်၏ပထမဦးဆုံးဌာန၌လာရောက်လည်ပတ်ရကျိုးနပ်မယ့်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယင်း - ဤတွင်အခြား key ကိုဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည် စိန့် Vitus ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း။
3 ။ Josefov: မြို့အအရေးကြီးသောသမိုင်းဆိုင်ရာအပိုင်းရှည်လျားဂျူးလူဦးရေရဲ့နေထိုင်ရာနေရာတစ်နေရာစဉ်းစားလျက်ရှိသည်။
လေးပုံတပုံက၎င်း၏ဗိသုကာများအတွက်သာလူသိများခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းဒီမှာကြီးမြတ်စာရေးဆရာမွေးဖွားခဲ့သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဖရန့် Kafka ။
လူဦးရေ: 10.5 သန်း။
နယ်မြေတွေကို : 78.866 ကီလိုမီတာ2.
ငွေကြေး: ခကျြခကျြ koruna ။
ပရာ့ဂ်ဖို့ဘယ်လို: ခကျြခကျြမြို့တော် - မြို့တော်ကိုအလွန်လူကြိုက်များလျက်ရှိ၏ ဤနေရာတွင် Samara နှင့် Yekaterinburg အပါအဝင်အဓိကရုရှားအမြို့မြို့တို့မှတိုက်ရိုက်ပျံသန်းမှု, တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရထားတွင်လည်းမရှိ, ပြဿနာများကို။
ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၌ဤနိုင်ငံတွင်းရှိလောင်းကစားဝိုင်းတားမြစ်ထားနှင့်မြင့်မားသောအလုံအလောက်အဆင့်မှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည့်အလွန်လောင်းကစားဝိုင်းလူမျိုးလည်းမရှိ။ ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ကာစီနိုသည်ခပ်သိမ်းသောမြို့စာသားကိုယ်စားပြုတာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အားလုံးအများစုကပရာ့ဂ်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကိုတစ်ဆယ်သူတို့ထဲကကဒီမှာရှိပါတယ်။ အများဆုံးဂုဏ်သရေရှိပရာ့ဂ်လောင်းကစားရုံမိုးလုံလေလုံမှန်အိမ်ဆောင်-ဟီလ်တန်, သံအမတ်ကြီးနှင့်ဟင်နရီကဲ့သို့သောတည်ထောင်ကြသည်။
"ဟီလ်တန်" - အဆိုပါလောင်းကစားရုံ "မိုးလုံလေလုံမှန်အိမ်ဆောင်-ဟီလ်တန်" ဟုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနာမည်ဟိုတယ်များ၏အဆောက်အဦအတွက်မြို့၏ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်။ ဧရိယာအားဖြင့်ကအကြီးဆုံးပရာ့ဂ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းကြီးမားတဲ့အကွာအဝေးမှထို့အပြင်မိုးလုံလေလုံမှန်အိမ်ဆောင်မှဧည့်သည်များနှုန်းထားများ၏ကျယ်ပြန့၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်ဒီလောင်းကစားရုံဝန်ဆောင်မှု၏မြင့်မားသောအဆင့်များအတွက်လူသိများသည်။ သီးခြားလောင်းကစားရုံခန်းမအပြင်, ထူထောင်မှုတစ်ချွေးပေါင်းအိမ်, ရေကူးကန်, ဘား, တစ်ကြံ့ခိုင်ရေးကလပ်နှင့်အမှတ်တရပစ္စည်းဆိုင်များပါဝင်သည်။
Wenceslas Square ကိုအပေါ်သမိုင်းဝင်မြို့၏စိတ်နှလုံးထဲမှာ "သံအမတ်ကြီး" ဟုခေါ်နေတဲ့လူသိများတဲ့လောင်းကစားရုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအမည်တူနှင့်အတူဟိုတယ်တွင်တည်ရှိသည်။ ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ကာစီနို, အဓိကအားဖြင့်၎င်း၏ဧည့်သည်များပါလိမ့်မည်ဟူသောအချက်ကိုများအတွက်ခရီးသွားဧည့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်ဝန်ဆောင်မှုအများအပြားဘာသာစကားများထွက်ယူသွားတတ်၏။
ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက်အသက်အကြီးဆုံးကာစီနိုလောင်းကစားရုံတစ်ခုမှာ "Savarin" ဟုခေါ်သည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ Prikope Street မှာတှေ့နိုငျပါသညျ။ ကပရာ့ဂ်၏မြေမှတ်တိုင်သောအဆောက်အဦတွင်တည်ရှိသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကလောင်းကစားရုံ, သတိထားမိဖို့မခက်ခဲသည်။ ဤသည်အဆောက်အဦ 1745 built-in များနှင့်ဘားရို့စတိုင်လ်၏အလွန်ပထမဦးဆုံးဥပမာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပြည်ထဲရေး "Savarina" ဧကရာဇ် chic အားဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။ ယင်း၏ finish ကိုရွှေနှင့်ငွေကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီလောင်းကစားရုံများတွင်ဧည့်သည်များဒါ့အပြင် slot ကစက်တွေ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကလည်းမရှိစသည်တို့ကိုအမေရိကန်ကစားတဲ့, ဖဲချပ်ဝေ, ဆိပ်ခံ, ကစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ "Savarin" ကိုအဝင်ဝကသီးခြားအခကြေးငွေတရားစွဲဆိုမဟုတ်ကြောင်းမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်စားသောက်ဆိုင်အခမဲ့ကော့တေးနှင့်အချိုရည်မှဧည့်သည်များဆကျဆံတယျ။ ကစားနည်းယူရိုနှင့်ခကျြ korunas အတွက်နှစ်ဦးစလုံးကိုလကျခံခဲ့ရသည်။
0.1 ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက် on-line ကလောင်းကစားဝိုင်း
0.2 ထိပ်တန်း 10 ခကျြအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
3 ကာစီနိုဘိုဟီးမီးယား, ခကျြကိုမှန်ကန်လူကြိုက်များလောင်းကစားရုံ
4.0.1 ပရာ့ဂ်, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ: သန့်ရှင်းသောဘုရားသည်ရောမအင်ပါယာ၏မြို့တော်
2020 Roadhouse reels လောင်းကစားရုံအတွက်အပ်ငွေအပိုဆောင်းကုဒ်များမရှိပါ